Buffon oo sheegay inuusan u xiisi doonin mid ka mid ah xidigaha ka xamaasha horyaalka Talyaaniga iyo sababata ka dambeysa – Gool FM
Buffon oo sheegay inuusan u xiisi doonin mid ka mid ah xidigaha ka xamaasha horyaalka Talyaaniga iyo sababata ka dambeysa
(Serie A) 05 Dis 2018. Goolhaayaha kooxda Paris St Germain Gianluigi Buffon ayaa sheegay muhiimada ay u leedahay kooxdiisii hore ee Juventus saxiixa Cristiano Ronaldo ay sameeyeen suuqii lasoo dhaafay ee xagaaga.
Gianluigi Buffon ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay: “Heshiiska Juventus ee Cristiano wuxuu ahaa talaabo muhiim ah, sababtoo ah waxaa jiray ciyaartoy badan ee ku sugan Juve ee doonayay inay kooxda ka dhaqaaqaan”.
“Kadib markii aan go’aansaday inaan u dhaqaaqo kooxda PSG, waxaa muhim ahayd in la sameeyo saxiixa ciyaaryahan weyn ee sida Ronaldo”.
“Dabcan waxaan u xiisay Talyaaniga iyo kooxda Juventus ee aan ku soo qaatay in ka badan 20 sano, balse uma xiisin Mauro Icardi sababtoo ah wuxuu iga dhaliyay goolal badan”.
Waxaa xusid mudan in weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi uu ka dhaliyay Gianluigi Buffon ilaa iyo 8 gool.
Ugu dambeyn Gianluigi Buffon ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in kooxdiisa hore Juventus ay kaliya isku arkaan kulanka kama dambeysta ah ee tartanka Champions League.
“Waxaan rajeenayaa in aan ku wajaho Juventus tartanka Champions League, laakiin waa kulanka finalka oo kaliya”.
Toni Kroos oo si cad u sheegay waxa uu doonayo inuu sameeyo mustaqbalka kadib marka uu ka fariisto kubada cagta
"Man United weli waa Man United.".- Lucas Torreira oo Fariin u diray Saaxiibadiisa ka hor kulanka Caawa